Ngaba isitshixo kunye noPeele's 'Keanu' waseHollywood weFilimu yokuqala yePro-Feline? | - Iimuvi
Eyona Iimuvi Ngaba isitshixo kunye noPeele's 'Keanu' waseHollywood weFilimu yokuqala yePro-Feline?
Keegan-Michael Key kwaye Jordan Peele.ngoncedo lweWarner Brothers
UKeegan-Michael Key kunye nenqaku lokuqala elipheleleyo le-Jordan Peele, Keanu , Uyaqhubeka nomyalezo okwi-duo on-point, omnye athe wajongana nawo rhoqo kubo Isitshixo & Peele skits: Ukwaphula ubuhlanga obukhathaza amadoda ase-Afrika aseMelika. Kodwa le bhanyabhanya, evule umhla wama-29 ku-Epreli, ikwajongana nenye into engachazwanga, enye ndiyonwabile ukuyibona idiliziwe: intiyo yokulwa ikati eHollywood . I-Felinism, ukuba uyathanda.
Ukusuka emacaleni amhlophe amhlophe amhlophe, ukuhlala kude, izilwanyana zasekhaya ezingakhathaliyo, iikati zihlala ziboniswa njengezinto ezinentiyo, ezingendawo, ezizithandayo, ezonakalisayo okanye ezikhohlakeleyo. Ukuhlekisa kwekati, njengoburharha besini, kudlala iingcinga ezinobungozi malunga neekati kunye nabantu abazithandayo. Nangona kunjalo, iikati ziyathandwa kwi-Intanethi kwizidalwa ezinothando, ezonwabileyo nezithandekayo. Yintoni i-Hollywood engayifumaniyo? Kutheni le nto beqhubeka nokukhuthaza ezakudala, ezothusayo, iingcinga ezibubuxoki ezijikeleze iikati?
Ewe kunjalo, umbuzo ofanayo kufuneka ubuzwe kwiintlanga nakubantu besini esifana nesabo, njengoko iHollywood ingenzi ngcono kakhulu ngabo: behlala bephosa abadlali abamhlophe njengabalinganiswa bombala; ukuvelisa kunye nokukhuthaza iifilimu ezenziwa ngamadoda ekhokelela kumfazi omnye, ozimeleyo ukuze abonelele ngeelekese zamehlo; ukuthembela kudidi olufanayo lokudinwa, oludinayo kunye nesini- kunye nohlekiso olusekwe kubuhlanga. Kodwa ngelixa abadali benakho ukuthethelela ukhetho lwabo ngokuthi ezi bhanyabhanya zithengisa ngcono okanye aba badlali banamatyala amaninzi, ngaba iimovie zekati zaseHollywood ziyimpumelelo ngokwenene ukuba banokuthetha into enye?
Makhe sijonge ezimbalwa kwezi bhanyabhanya. Kukho imizekelo engenakubalwa yeekati ezimbi okanye ezikhohlakeleyo. Ukusuka eBela Lugosi's Ikati elimnyama , Kwiikati zaseSiamese (ungandiqali) kwiiDisney Inenekazi kunye neTramp , ukuya kutshanje Iikati & Izinja , iikati zidlala ubuncinci ubuqhetseba, ukuba azizalisekanga kwiidadi ezimbi; abakhohlakeleyo abakhohlakeleyo abafuna inkohlakalo okanye ukutshabalalisa kuphela. Nokuba uyathandeka kwaye umhle ngendlela emangalisayo Incwadi yeJungle , kwiindawo zemidlalo yeqonga ngoku, iBig Bad nguShere Khan, ingwe enoburhalarhume ekhohlakeleyo. Ewe ndiyazi ukuba uBagheera onobubele uyikati, kwaye kukho obunye ububi ehlathini (ikakhulu uKaa inyoka, kunye noKing Louie waseGigantopithecus). Kodwa ii-panther zikhangeleka ngathi ziikati zasendlini esizaziyo kunamahlosi, kwaye abanye abantu abakhohlakeleyo kumdlalo bhanyabhanya balandela nje iminqweno yabo. Abakhohlakele ngenkuthalo okanye benzakalise njengoShere Khan.
Ngezo zihlandlo xa iikati zinobukho njengezilwanyana zasekhaya okanye izixhobo zobuqhetseba, ziboniswa kwaye ziphathwa kakubi: njengengxaki engafunekiyo ( Ngaphakathi kukaLlewyn Davis, Dibana naBazali ), njengesitshabalalisi esibuhlungu ( I-Aristocats, ethi Darn Cat ), njenge-Azazeli, okanye njengexhoba lenkohlakalo okanye ubundlobongela oboyikekayo ( Isidlo sakusasa eTiffany’s, iGrand Budapest Hotel, Intombazana eneDragon Tattoo ). UKevin Spacey kungekudala udlala utata ongakhathaliyo wohlwaywa ngokuba nomphefumlo wakhe ubekwe emzimbeni wekati, awudelelayo, kwixesha elizayo (kwaye ujongeke kakubi) Ubomi obulithoba . Ikati enye in Ubomi obuyimfihlo bezilwanyana zasekhaya Itreyila yibhola ebandayo, yokuzingca, engenaluvakalelo yoboya.
Iifilimu ezimbalwa ezibonisa ububele, izilwanyana zasekhaya ezithandekayo zijolise kubafazi ( Inyaniso malunga neekati kunye neenja, ngelixa uleleyo ) kwaye bahlala bedlulisela iimpazamo ezingafihlwanga malunga nomlinganiswa-ngakumbi isithukuthezi. Kwi Molo, igama lam ndinguDoris , umzekelo, isetyenziselwa ukubonisa imeko elusizi kunye nengqondo engazinzanga yethiyitile uDoris, kunye nomama wakhe, bobabini abajongana nemiceli mngeni yokufumana ulwazi.
Akunqabile ukufumana iikati kwiimovie ezijolise emadodeni kunye nee-blockbusters. Imizekelo emibini etsiba engqondweni ziimovie zikaJames Bond, apho umphathi uStavros Blofeld ephethe i-Persian emhlophe emathangeni (kwakhona, ikati njengomfanekiso wobubi), kunye Umphambukeli Iimuvi. UJones ngokuyinxenye uliqhawe, kodwa ukwasetyenziselwa ukoyikisa okungabizi, kwaye ngekhe wazi ukuba wonakaliswe ngumphambukeli.
Oo, uJonesy.Inkulungwane ye-20-Fox
Ngaphandle koko, iikati zizinto ezihlekisayo. Kwi Ubushushu , umntu onesithukuthezi, ongenabahlobo uSandra Bullock unekati yokuzibandakanya, kuba akekho omnye umntu onokumthanda. Kwi Iipaki noLonwabo (umboniso endiwuthandayo ngenye indlela), kwisiqendu Sokuhamba ngeKampu, iqela lemigulukudu lihlala ebhedini nakwisidlo sakusasa esinomfazi osele ekhulile ongenamakhwiniba kunye neekati zakhe kuyo yonke indlu, engena endleleni kwaye ekhupha iindwendwe (oku Umntu unesimangalo esisisongelo esiphindwe kathathu: umntu wesini, umdala, kunye nekati). Kwi Intlola , UMelissa McCartney ekugqibeleni unikwe into yakhe yokuqala efihliweyo yokuguqula: a ikati egcweleyo ngewigi ejijekileyo, iiglasi ezingqindilili, kunye neempahla ezingalinganiyo ezibandakanya intloko yekati enkulu eboniswe kwisikipa sayo.
Ubundlobongela baseHollywood kunye nokuchasana nekati kuhlala kuhamba kunye. Ibinzana elinenekazi eliphambeneyo liyawushwankathela lo mbandela, kwaye liphoswa ngeenxa zonke rhoqo. Ukungahoyi okwangoku eli gama liphambene yingxaki , kusisithuko ukubonisa ukuba umntu kufuneka abe nokukhubazeka kwengqondo ukuze athande iikati, ngakumbi ukuba ungumnikazi ongaphezulu kwesinye. Iziqhulo zikhohlakele kwaye azihlekisi, kwaye iikati zinoburharha, zinesiphithiphithi, ziyaphazamisa okanye zimbi. Nokuba kukho into engalunganga kubo (okt: baphosa kakhulu), okanye benza into embi. Nokuba kuthethwe ngekati engaphandle kwekhamera, uyayiva ingxola, Umkhwezeli oyikisayo mrowr (njenge UWilhelm uyakhwaza Kwilizwe lekati) ehambisa ukungathandeki, kunokuba ibe yinto elula. Andiqondi ukuba ndakhe ndeva eso sandi kwikati yokwenyani ebomini bam bonke.
Akukho ndoda iphambeneyo yekati, kwaye akukho manenja aphambeneyo. Yimbonakalo yohlobo lwe-asinine, kodwa enye ayikafi ncam, okanye icelwe umngeni ngokwaneleyo.
Stereotypically, amadoda ayadityaniswa nezinja , kwaye izinja zaseHollywood zibonisa kuphela ezona mpawu zibalaseleyo zomntu: unyanisekile, ukhaliphile, ulungile, uyathemba kwaye uthembekile, unengqiqo, kwaye usebenza nzima. Abafazi bayadibana neekati , kwaye iikati zaseHollywood zibonisa kuphela eyona mikhwa mibi: ukukhohlisa, ukuthatha amathuba, ukubhabha, i-neurotic, ukuzingca, intle, kodwa ekugqibeleni akunamsebenzi. Njengezinja, amadoda asukela abafazi, kodwa kuthathwa njengamadoda ukuba athande okanye abe neekati. Akukho ndoda iphambeneyo yekati, kwaye akukho manenja aphambeneyo. Yimbonakalo yohlobo lwe-asinine, kodwa enye ayikafi ncam, okanye icelwe umngeni ngokwaneleyo.
Njengokuboniswa kwefilimu yabasetyhini okanye abantu abanemibala, ngakumbi iimovie zibonisa ukubonakaliswa okungathandekiyo kwabancinci (nokuba kungobani abambalwa) kokukhona kunokwenzeka ukuba lo mfanekiso okanye umboniso wobuxoki ube yinto elindelwe ngababukeli. Kulula, kunye nelazier, ukusebenzisa iindlela ezifanayo ezindala kwakhona.
Ekugqibeleni, ifilimu yePro-Cat
Keanu .Ngokunyanisekileyo kweWarner Brothers
Kodwa ngoku, ekugqibeleni, kukho Keanu . UKeegan-Michael Key noJordani Peele badlala uClarence noRell ngokwahlukeneyo: abahlobo abanesidima abazenza abathengisi beziyobisi abanzima ukuze babuyise intshontsho likaPeele, owayekhathazwe yinkokeli yemigulukudu. Abapheleli nje ekuyileni kwakhona uhlobo olugqithisileyo lwaseMelika kunye nomfanekiso wendlela abantu abamnyama ekufanele ukuba bathethe kwaye baziphathe ngayo, kodwa bayayidiliza imbonakalo yekati egwenxa endaweni yoko babonakalise ukuswela kwabo. Babonisa ukuba iikati azikho bubi (kwaye abanye abantu, nokuba benza izinto ezimbi), kwaye kulungile ukuba amadoda athande iikati. Babona ngaphaya kweeklasikhi zeekati ezibonisa stereotypical kwaye endaweni yoko, babophelela iikati zamandla kwi-Intanethi, kunye namava abo okudala iividiyo zentsholongwane (iziqwengana ezivela kumdlalo wabo weComedy Central ziye zafumana izigidi zokubetha kwiYouTube), ukwenza le filimu.
Nokuba ubude bude apho ikati ingekho kwiscreen, usaqhuba iyelenqe. UKeanu uyathandeka, kwaye wonke umntu kwifilimu uyazi. Bonke abalinganiswa, ukusuka kweyona nerd ilulamileyo (uClarence) ukuya kolona lwaphulo-mthetho lunzima (Indlela Yomntu, njengoCheddar), bayayithanda ikati, kwaye zonke iintshukumo zefilimu zikhuthazwa luthando lwesidalwa esimnandi. Ucinga ukuba abantu ababi baya kuyenzakalisa ikati, kodwa hayi, bonke bayamfuna ngokwabo. Iqela leziyobisi ezilwayo ziyabandakanyeka, kodwa endaweni yemfazwe ye-turf, yimfazwe yoboya, elwa ukuba ngubani oza kugcina uKeanu-nangona iqela ngalinye linegama lalo (kwaye onke ayindoda, amagama akhethekileyo enkcubeko; hayi Fluffy okanye uJinxy apha). Umbono wala madoda mabi alwa nekatana encinci, ethandekayo yinto eyoyikekayo, eyamkelekileyo.
UKeanu uhlakaniphile, unobuchule, unothando, kwaye unyanisekile ngokuqatha kwiqhawe lemovie. Ugcina uRell ubuncinci kabini kwifilimu. Ekuphela kwento eyenziwa yikati, ethi kwezinye iifilimu isetyenziselwe ukubonisa ukungakhathali, ukungathembeki, isenzo esibi seekati, kulapho (umbhuqi?) UKeanu uhlasela umntu ombi ohlasela uRell. Yeyiphi indlela eqinisekileyo, uKeanu ligorha lokwenyani!
Umbono wala madoda mabi alwa nekatana encinci, ethandekayo yinto eyoyikekayo, eyamkelekileyo.
Kwaye okona kubaluleke kakhulu, ifilimu ayisebenzisi nayiphi na i-CGI, elungileyo okanye embi, ubuncinci hayi apho iikati zichaphazelekayo. Keanu Umlawuli uPeter Atencio wanyanzelisa ukusebenza nekati yokwenyani (kulungile, iibhokhwe ezisixhenxe ) edlala uKeanu, ukugxininisa ukusika kunye nokubonisa iikati ngakumbi njengoko zinjalo, kunokuba uthembele kwi-CGI eyoyikekayo ukubonisa ikati eyoziphatha kakubi nehlukumezayo (njenge Ubomi obulithoba ). Bayayazi indlela ezimnandi ngayo iikati, kwaye baya emandleni nasezindlekweni ukuyibonisa, beqeqesha amantshontsho ukuwatyalela, banxibe iminqwazi, kwaye baphephe iimbumbulu ezingezizo.
Isikhalazo endinaso kuphela kukuba basebenzise ikati esencinci hayi ikati epheleleyo. Ndiyakuqonda kwaye ndiyabulela ukufuna kwabo ukudlala into enomdla, kwaye iikati ezincinci kulula ukuziqeqesha, kodwa iikati zihlala zilula ukuzamkela kwaye zifumane amakhaya amahle kuneekati zabantu abadala, nokuba abantu abadala baneminyaka nje embalwa ubudala. Amantshontsho ekati akhula ngokukhawuleza kakhulu- yinxalenye yesizathu sokuba Keanu abasebenzi kufuneka basebenzise iqela labo. Kodwa iikati ezindala zinencasa, zithanda, zintle, kwaye ziyadlala njengeekati ezincinci, kwaye uninzi lwazo lufuna ukuthanda amakhaya ngonaphakade. Zininzi kakhulu iikati kunye neekati ezifuna amakhaya, ke kuye wonke umntu ongena Keanu Ukulwa le katshi enye kundenze ndadana. Kodwa siza kuyiyeka loo nto, ngenxa yelenqe.
Ndonwabile u-Key noPeele basebenzise ubuqaqawuli babo obuqaqambileyo kunye nokuvula amehlo kwintlalontle kubahlobo bethu. Ndonwabile kakhulu kukuba zonke iikati ezisetyenzisiweyo Keanu zamkelwa. Mhlawumbi kunjalo Keanu iya kwenza indlela yokuba iikati zokwenyani zisetyenziswe kwiifilimu, kwaye mhlawumbi ngenye imini zinokunceda ekulungiseni igama leekati ezicocekileyo.
URenée Camus ngokucacileyo ungumntu omkhulu wekati, ngoku uhlala nabo babini (omnye wabo wayehleli ethangeni lakhe ngelixa ebhala eli nqaku) eBurbank, CA. Uyi-junkie yenkcubeko ye-pop ebhalelwe i-Los Angeles Times, iphephancwadi laseLos Angeles, LA Weekly, Reel Life noJane, Moviefone, Mashable, kunye Playboy, phakathi kwabanye. Ubhala malunga nepop kunye geek inkcubeko kwibhlog yakhe kwi IGeek ekufutshane . Mlandele kwiThe Twitters ngo @yonkqayi .
UGiuliani ucinga ukuba athathwe amaNtombazana aseNigeria kufanele ukuba abe noGxininiso lukaBlasio, hayi iiFerrets
Ummeli waseNebraska. UJeff Fortenberry Wenza Ukunuka Okukhulu Ngaphezulu 'kweFartenberry' Dig
UDaniel Webber we-'11 .22.63 'ngokungena kwingqondo ka-Lee Harvey Oswald
'IGotham' Isikhokelo sokuKhangela sokuGqibela ukuwa: Inkqubo yeRhyme
Unyango lwendalo losulelo lwebacteria
Ndiphilise njani uxinzelelo lwam
zingaphi izindlu ezinalebron james?
uthetha ntoni owona mfanekiso mhle